Shiinaha iibiyaha qurxinta qurxinta qurxinta muuqaalka muuqaalka muuqaalka muuqaalka muuqaalka shimmer wejiga warshad budada iftiimiya iyo alaab-qeybiyeyaasha. Qurxinta Iris
soo-saareyaasha iibiya-muujiyeyaasha qurxinta qurxinta leh calaamadda-muujiyeyaasha qurxinta shimmer wejiga budada iftiimiya
Astaamaha iftiinka birta aadka u midabaysan, ku abuur iftiin khafiif ah ama iftiin buuxa oo leh boodhkan xasaasiga ah, ee maqaarka kor u qaadaya.
OEM .ODM: La heli karo
Qiimaha EXW: 1.55 ~ 2.99 USD / PCS
Kudar iftiin iyo iftiin ku darista jimicsigaaga qurxinta macdanta birta ah.
Iftiimiyayaasheena macdan si loo muujiyo dhibcaha sare oo loogu daro cabirka wejigaaga iftiin dhalaalaya.
Waxaad la dhici doontaa jacayl leh wejigan yar ee habboon ee muujinta budada ee ku siinaya astaamahaaga iftiin aad u xoog badan oo u muuqda dhammaantiin adigu!
Magaca Shayga Qurxinta sare
2.Vegan / Paraben bilaash ah
Midabada luul oo si heer sare ah uga tarjumeysa
4. Silky, khafiif ah
5. Muddo dheer
Baakadaha sanduuqa midabka naqshadeynta
2.Q: Sideen ku heli karaa shaybaar si aan u hubiyo tayadaada?
3.Q: Ma aqbashaa OEM ODM oo ma noo samayn kartaa naqshadeynta?
4.Q: Muddo intee le'eg ayaan filan karaa in tijaabada la ii qaado?
5.Q: Ka waran waqtiga hogaaminta ee wax soo saarka badan?
6.Q: Waa maxay shuruudaha lacag bixintaada?
7.S: Sida loola xiriiro?
Hore: vegan eco makeup remover oil hydrating summadaha khaaska ah ee nadiifinta saliida nadiifinta waxay ka kooban tahay ka saar
Xiga: vegan highlighter calaamadee khaas ah makeup qurxiyo customl highlighter makeup gaar ah oem highlighter palette
qurxinta qurxinta qurxinta
iibiyaha makeup-ka sare
qurxinta jumlada qurxinta
Qurxinta Palette Qurxinta
qurxiyo budada sare
No Logo Highlighter makeup
Aasaaska jumlada qurxiyo caadadii vegan founda ...
Aasaaska Custom sumadda gaarka loo leeyahay matte foundatio ...
OEM wejiga aasaaska makeup makeup dareere cus ...
vegan highlighter sumadda gaarka loo leeyahay qurxiyo h ...
macmacaan bey'ada loo yaqaan 'eco eco makeup oil' oo si gaar ah u ...
Aasaaska tayo sare leh dareere caymiska buuxa fo ...